Mahita an'i Azeroth - Famakafakana ny World of Warcraft Zones | WoW mpitari-dalana
En Nahita an'i Azeroth hiresaka momba ny World of Warcraft faritra, ny tantaran'izy ireo, ireo zavaboary monina azy ireo ary hampahafantarinay ihany koa ny tsiambaratelony.
Mahita an'i Azeroth: Nagrand
ny Ana Martin hace 7 taona .
I Nagrand dia eo andrefan'ny Talador sy atsimon'ny Frostfire Ridge; mitovy aminy…
Mahita an'i Azeroth: Spiers of Arak
Ny Spires of Arak dia mandrakotra habakabaka midadasika any atsimon'i Draenor. Izy io dia faritra mifandimby tampon-tampona ...
Mahita an'i Azeroth: Talador
Talador dia eo afovoan'ny Draenor, mandray ny tanànan'i Shattrath sy ny sisa fanahy ...
Mahita an'i Azeroth: Gorgrond
Gorgrond no faritra iraisana voalohany amin'ireo ankolafy roa izay ho hitantsika ao Draenor ary any koa hainay ny manangana ny ...
Mahita an'i Azeroth: Frostfire Ridge
Ny Frostfire Ridge dia any avaratra andrefan'ny Draenor. Izy io dia faritra tsy azo ihodivirana, miaraka amin'ny ririnina mitohy ...
Mahita an'i Azeroth: Lohasaha Shadowmoon
Ny Lohasaha Shadowmoon dia eo atsimo atsinanan'ny Draenor. Lohasaha misy ala maitso sy ...
Mahita an'i Azeroth: Grizzly Hills
ny Victor Barrios hace 7 taona .
«Nanomboka nianika ny Howling Fjord aho, rehefa nandroso aho dia nahatsapa ny fiandohan'ny lanezy ...
Mahita an'i Azeroth: tampoka ny tafio-drivotra
ny William Molina hace 7 taona .
Taloha ela dia nonina teto amin'ity toerana ity ny Titans. Namorona an'i Ulduar, tanànany izy ireo, ary avy eto no nanaovan'izy ireo ny andrana. Ny Storm Peaks dia voalaza fa ny fonenan'ny olona goavam-be ary koa ny dwarves sy troggs. Rehefa nanjavona ny Titans dia nilaozan'ny fiafarany ny arabe. Nifindra nianatsimo ireo dwarves, mankamin'ny toetrandro mafana. Saingy nijanona teto ireo olona goavan'ny tafio-drivotra.
Mahita an'i Azeroth: Plaguelands Andrefana
ny Dani tortosa hace 7 taona .
ny Plaguelands Andrefana manomboka mamorona ny tenany izy ireo noho ny ezaky ny mpikambana ao amin'ny Cenarion Circle, fa ny faritra sasany toa an'i Andorhal dia mbola ravan'ny ady. Taorian'ny fianjeran'ny Monastera Scarlet sy ny fandresena tany Northrend dia nalain'i Tirion Fordring i Vega del Amparo ary miasa ankehitriny ho toy ny tranonkala hahitan'ny mpilalao iraka hovitaina.
Nahita an'i Azeroth: Ny làlan'ny fahafatesana
Faritra manjombona sy manintona izay hadinon'ny maro, manafina tsiambaratelo tsy manam-paharoa sy miafina izay tsy misy fanazavana. Avy lavitra dia hitanao ny tilikambo lava mipoitra avy amin'ny zavona ary henontsika ny fidradradradran'ny rivotra izay mamakivaky ny vatolampy mitroka sy ny volondavenona.